လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုခံယူခြင်းတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအချက်များ (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
စာနယ်ဇင်းများတွင်. လေ့လာမှုပါရှိသည်ထားတဲ့ PDF ဖိုင်သို့လင့်.
မာတေယူချ် K. Gola * နှင့် MACIEJ SKORKO
စိတ်ပညာ၏ * Institute မှ, သိပ္ပံ၏ပိုလန်အကယ်ဒမီ, ဝါဆော, ပိုလန်, E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုဖို့ Access ကိုအင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ဒါလွယ်ကူသောဖူးပါ။ (Pw) စောင့်ကြည့်မကြာခဏ porn စွဲလမ်းဖြစ်သို့မဟုတ်မနိုင်ရှိမရှိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိပါသည်။ တဖကျတှငျ porn အသုံးပြုသူများသည် (PU) ၏သန်းပေါင်းများစွာမဆိုပြဿနာများကိုသတင်းပို့ပေမယ့်အခြား psychotherapists အပေါ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (LCoSB ကျော်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးအကူအညီနဲ့ရှာနေလူများ၏အရေအတွက်တိုးမှတ်တမ်းတင်ကြဘူး; ဆိုလိုသည်မှာအလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့် PW သို့မဟုတ် paid လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုမှု) ။ တချို့ကသုတေသီများ LCoSB ၏အဓိပ္ပာယ် obsessive-compulsive (OCD) စရိုက်များမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ယခုတင်ပြသောစာတမ်းအတည်ပြုရန်နှင့်မကြာခဏ Pw LCoSB နှင့်အတူ related နိုင်ပါတယ်လျှင်မေးခွန်းကိုဖြေဖို့ကျွန်တော် 61 တစ်ဦးချင်းစီ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) အတွက်ကုသမှုဖြစ်ခြင်းနှင့် 964 မှ PU (ပုံထဲမှာထိပ်ပိုင်း-left) ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
ဖျန်ဖြေခြင်း, စင်ကြယ်သော Pw အလွန်ကိုအားနည်းစွာ LCoSB နှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းပြသ, ဒါပေမဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ပြင်းထန်မှုမှတဆင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေ (ASB; စသည်တို့ကိုအလုပ်မှာဆိုလိုသည်မှာမကြာခဏ Pw, အများသုံးအိမ်သာထဲမှာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ) ၏ analysis (ပုံထဲမှာ Bottom-left) သိသာထင်ရှားသောဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဘာသာရပ်များများထဲတွင်ကျွန်တော်တစ်ပတ်ကို 420 မိနစ်ကျော် porn ကိုကြည့်တစ်ဦးချင်းစီ၏အဆောင်များတွင်ရွေးချယ်ထားကြသည်။ ဒီဆောင်များတွင်အတွင်းကျနော်တို့ 21 CSB လူနာများနှင့် 36 မှ PU (ပုံထဲမှာထိပ်တန်းညာ) တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအုပ်စုနှစ်စု, Pw အပေါ်အချိန်ဖြုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ OCD လက္ခဏာတွေကြိမ်နှုန်းကွာခြားခဲ့ပါဘူး။
ဤလူအချို့ကိုကုသမှု (CSB) သို့ ဝင်. နှင့်အခြားသူများမဆိုတဲ့အချက်ကို (PU) LCoSB (ပုံထဲမှာ Bottom-ညာ) ကကမကထပြုခဲ့ ASB ၏ပြင်းထန်မှုတို့အပေါ်မှာမူတည်မှ seams ။